उमेर-पुराना बाश्कीर क्षेत्रमा वरिपरि, ताल Elovoe (चेल्याबिन्स्क क्षेत्रका) रूसी नाम हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद। र यो अन्य Finno-Ugric र तुर्की नाम हुन् रूप मा, वरपर पानी मात्र शरीर छ। ताल शहर र Miass Tchebarkul बीच स्थित छ। स्प्रूस - अलवण जलाशय र hydrological स्मारक। यो पोखरी बीच स्थित छ को यूराल पहाड समुद्र स्तर माथि 322 मीटर को ऊंचाई मा। 3.2 मी2- ताल आकार, आफ्नो आकार गोलाकार। चौडाई मा2भन्दा बढी किलोमिटर - - को लम्बाइ2भन्दा पनि कम तट - 10 किलोमिटर। अधिकतम गहिराई - 13 मीटर र एक औसत - 8 परिमिति पारदर्शी पानी -4मीटर। तरल मात्रा - 26 लाख भन्दा बढी वर्ग मीटर।
लेक Elovoe को पानी शासन
भूमिगत पानी स्रोतहरु, पानीका मुहानहरू, वर्षा र snowmelt: ताल Elovoe एक मिश्रित पानी आपूर्ति छ। निम्नानुसार पानी शरीर, नदी Gudkovka मा बग्छ - Elovka। एक श्रृंखला को Elovoe भाग : पहाड पोखरी को ठूलो Miassovo Terenkul, लघु Miassovo, Chebarkul, Kisegach साना, ठूला र ठूलो Elanchik Kisegach। Waterfront ज्यादातर ठाडो। - 15 हा (यो चेल्याबिन्स्क क्षेत्रमा सबै भन्दा ठूलो द्वीप छ), र दुई साना - 1 हा एक ठूलो: यसको सानो आकार बावजुद ताल3द्वीप छ। वर्ष को मौसम अवस्था आधारमा, स्थिर-अप लेट नोभेम्बर लेट अक्टोबर देखि हुन्छ, र बरफ को तोडने - मध्य-अप्रिल देखि मध्य-मई। एक जलाशय नदी Elovka को यो जडान देखि Springing ताल Chebarkul। स्प्रूस - एक, आरामदायक शान्त र शान्तिपूर्ण ताल। तर आँधी मा छालहरू एक मीटर सम्म वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यस्तो infrequently छ। ताल बिल्कुल निर्देशन र राम्रो गरम देखि हावा बाट sheltered छ। यो वास्तवमा को स्विमिंग सिजन को लामो अवधि हुन्छ।
ताल Elovoe मा मत्स्य पालन
ताल Elovoe स्थानीय माझिहरु लागि आकर्षक मात्र। मान्छे सबै रूस देखि माछा मार्ने उत्साही लागि यहाँ आउनुहोस्। Pike, ripus, crucian आक्षेप, rudd, आईडीई, tench, ब्रीम, Ruff, अड्डा र burbot द्वारा Inhabited एक तालाब मा। माछा स्रोतको आधारभूत मर्मतका - प्राकृतिक spawning। औद्योगिक माछा मार्ने बाहिर छैन। खोक्रो पानी मा, तपाईं मात्र सानो dace र अड्डा पकड गर्न सक्नुहुन्छ। एक ठूलो माछा ताल ठाउँ वरिपरि डुङ्गा बाट पक्रेको हो। नियम, सर्कल, zherlitsy (zhivtsovye गियर) र कताई प्रयोग गर्नुहोस्। जाडो संग माछा मार्ने कारीगरों सानो Ruff, अड्डा र dace ल्याउन। हालैका वर्षहरूमा, माछा को संख्या कि बढ्दो एकाग्रता संकेत, एकदम बढेको छ पोषक को, यसको खाना हो जो।
को स्प्रूस लेक मा मनोरञ्जन केन्द्र र रिसोर्ट्स
Elovoe लेक दक्षिण यूराल सबैभन्दा आकर्षक ठाउँमा को छ। यो छ एक स्थिर वातावरण र अधिक एक सताब्दी को लागि, आफ्नो संरचना कायम रहन्छ। पनि पारदर्शी 1969 देखि (स्मारक स्थिति ग्रहण को समय) छैन, यो छिमेकी पानी मा आदेश अस्वीकार हुनत परिवर्तन भएको छ। "जंगली" र अनुमति: स्प्रूस लेक मा आराम दुई प्रकारका मान्छ। पहिलो पाल र अन्य पर्यटक उपकरण उपस्थिति implies। आधार "वसन्त" "यूराल Dawns" घरेलु "Elovoe" अस्पताल "Elovoe" आधार, "पाइन हिल" र UralVO: यसको सानो आकार कारण संस्थाहरू एक बिट एक ताल Elovoe छ। सबै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा आफ्नै तटों र पानी मा राम्रो प्रविष्टि, खेल र छोराछोरीको खेल को मैदानों छ, स्किइङ र माछा मार्ने लागि डुङ्गा एक सेट, वुडल्याण्ड चल्छ र यात्राहरु गर्न कल्पित छन्। कुनै पनि मनोरञ्जन (लेक Elovoe) को योग्य एनिमेटरहरु गर्न playrooms बाल लागि मनोरञ्जन पूर्ण सीमा छ। उहाँले चाहन्छ रूपमा प्रत्येक साझेदार पकड हुनेछ।
यसको गोलाकार आकृति द्वारा प्रमाणित ताल Elovoe, tectonic मूल छ। कसले बढ्दै को बैंकहरू छ पाइन र सन्टी वन। जो को तालाब गठन फलस्वरूप tectonic पारी अघि, यहाँ अवशेष वन थियो। तिनीहरूले नक्सा र समय को लिखित स्रोतहरू अनुसार, XIX सताब्दी को मध्य सम्म रह्यो। हाल, एफआइआर, को namesake ताल मा, भेटिएन। प्रारम्भिक XX सताब्दी मा, टिप्पणी हुनत स्थानीय इतिहासकार व्लादिमीर Sementovskii, म यहाँ र स्प्रूस र FIR भेटे। ताल पानी खनिज मौसम निर्भर दायरा 161 देखि 340 मिलीग्राम / लीटर गर्न, नरम छ। यसलाई सोडा देखि सल्फेट-सोडियम प्रकार गर्न संक्रमण मा, hydrocarbonate वर्ग पर्छ।
ताल Riddle Elovoe
पडोस मा पानी को सबै शरीर, लगभग सबै गर्मी ब्लूम, तर ताल रहिरहेमा सफा Elovoe। अप "खिल" को 10 पटक सीमा गर्न - फस्फोरस र नाइट्रोजन यौगिकों को एकाग्रता एकदम उच्च छ। पनि नीलो-हरियो र हरियो शैवाल को वनस्पति अवधिको बीचमा एक जलाशय प्रक्रिया मात्र प्रारम्भिक चरण पुग्यो। वैज्ञानिकहरूले फूल को एक शक्तिशाली अवरोध अस्तित्व, मैंगनीज अनुग्रह सक्छ जो भूमिका, पानी मा ठूलो परिमाणमा उपलब्ध सुझाव। उसले phytoplankton को suppressor तीव्र विकास कार्य हुन सक्छ।
ताल Elovoe, सबै कुरा भए तापनि अझै पनि यसको प्राकृतिक कायम रहन्छ। तथापि, atrophy को स्तर अझै पनि वर्ष वर्ष द्वारा, विशेष गरी गर्मी बढ्दै छ पानी बढ्छ को शरीर मा लोड देखि (यहाँ 70 हजार पर्यटक एक वर्ष आउन)। घोडा मोटर चालित पौडी सुविधाहरु एकदम किनभने तेल लगे रिसेट को ताल मा पर्यावरण अवस्था कम गर्छ। आफ्नो प्रभाव माछा र पानी र भूमि दुवै बिरुवाहरु को राज्य असर गर्छ। पनि पानी फिल्टर कि गिरा आदिम जीव को संख्या। त्यहाँ adversely जीवित जगतले असर जो पोखरी algotoksinami को प्रदूषण को एक खतरा छ। सबै कुरा सँगै पानी गुणस्तर को एक गिरावट गर्न सक्छ।
Curonian थुक्नु, लिथुआनिया: आकर्षण, होटल, मौसम, छुट्टी
को थिएटर मा सबै भन्दा राम्रो सिट के हुन्?
रयान Shohyuz: जीवनी, रोचक तथ्य, फोटो
को Dnieper नदी को स्रोत, को Slavs को मुख्य नदी
डुङ्गा मा जन्मदिन - एक अविस्मरणीय छुट्टी
हानि मेयोनेज, जो सबै जान्नु आवश्यक!
"Valsartan": प्रयोगको लागि निर्देशन। चिकित्सा "Valsartan" - analogues र समीक्षा